HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES 20-SEP 2021
Monday September 20, 2021 - 07:12:59 in Wararka by Mogadishu Times
Ra’iisul Wasaaraha Xuluumadda xilgaars iinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoo miyay shirka tiirka Arrimaha Bulshada.
Shirka ayaa looga hadlay mashaariicda lagu horuma rinayo arrimaha bulshada, iy adoo lagu soo bandhigay qo rshaha la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo dhismaha xarunta Qaran ee gurmadka deg de gga ah.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa uu waday kulamo isdaba-jooga ah, waxaana shalau uu guddoomiyay Shirka Tiirka Dhaqaalaha Dalka.
Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Ra’iisul Wasaare Rooble uu guddoomiyo shi rarka tubaha kala duwan ee Xukuumaddiisa, iy ada oo uu weli jiro khilaafka Farmaajo &Roble.
Waxaa Dorraad magaalada Jowhar ka dhac day doorasho kursi ka mid ah kuraasta Aqalka sare kaas oo ay ka dhalatay buuq iyo rabsh ado ka dhacay hoolka doorashada ka dib mar kii sida Ay sheegtay inay HOL xogta ku he shay Madaxweynaha Hirshabelle iyo qaar ka mid ah guddoonka barlamaanka ay balanta u ga baxeen Madaxweyne ku xigeenka Hirshab elle Yuusuf Dabageed.
Sida ay HOL sheegtay in ay ogaatay,
Dabageed ayaa lagu qanciyey in laga talo-galin doono murashaxiinta bee shiisa. Beesha Xawaadle ayaa laba kursi ku leh Aqalka Sare, waxaa marka laga soo tago ku rsigan muranku ka taagan ya hay hore loo doortay Nuur Maxamed Geedi (Canjeex) oo ka sharaxnaa dhanka Madaxwe ynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe.
Ilo xogogaal ah oo ay sheegtay in HOL ka heshay madaxda Hirshabelle iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ayay ku ogaatay in Cali Gu udlaawe iyo qaar ka mid ah guddoonka barl amaanka ay u ololeynayeen in la soo saaro Murashax ay wateen Madaxtooyada Soomaal iya oo lagu magacaabo Cabdalle Cabdi Xus een, halka Madaxweyne ku xigeenka Hirshab elle iyo xildhibaanada beeshiisa ay dabada ka riixayeen Cali Shacbaan Ibraahim. Musharax Cali Shacbaan ayaa helay 28 cod, waxaana ku xigay Cabdalla Cabdi oo helay 29 cod, halka musharax Cabdiqaadir Xanafi Sheekh uu hel ay 35 cod.
Xaalada magaalada Jowhar ayaa laga dar eemayaa guux iyo dareen ka dhex jira labada dhinac oo xiisada ka dhalatay kursigan ay ke entay inuu hakad ku yimaado xiriirkii wadash aqeyn ee ka dhaxeeyay labada xafiis ee ugu sareeya Hirshabelle. Ilo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan garabka Dabageed iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay inay qarka u saaranyihiin inay ka dhoofaan magaalada Jo whar. Waxay sheegeen in aan la ixtiraamin sa ami qeybsiga ay ku leeyihiin Hirshabelle ayna dareemayaan inuu gacan bidixeeyay Cali Guu dlaawe, waa sida ay hadalka u dhigeene. Dhanka kale, kullamo ay yesheen Cali Guudla awe iyo qaar ka mid ah gudoonka barlamaan ka Hirshabelle ayay xogtu sheegaysaa inay u ga arrinsadeen sidii ay hore i sii wadi lahayeen doorashada, inkastoo talaabadan aan la ogeyn inuu aqbali doono Yuusuf Dabageed.
Waxaa muuqata in khilaafka ka dhashay kur sigan uu dhaliyey inuu madmadow soo kala dhexgalo madaxda Hirshabelle iyadoo hore ay u jirtay in beesha uu ka soo jeedo Dabageed ay saluugsantahay qaabdhismeedka dowlad goboleedka Hirshabelle. Xigasho:hiiraan.com
Qoor Qoor iyo Rooble oo Xalay he shiiyey Maxay isku hayeen?
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo Ra’iisul Wasaare Maxa med Xuseen Rooble ayaa Xalay yeeshay ku lan gaar ah oo ay heshiis uga gaarayeen ma dmadow waayahaan soo kala dhex-galay, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Kulanka oo Shalay u soo idlaaday Ro oble iyo Qoor Qoor ayaa xogta aan helnay wa xay sheegeysaa inay uga heshiiyeen xorguf si yaasadeed uu u dhaxeysay tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka Far maajo iyo Rooble.
Madaxweyne Axmed Qoor Qoor ayaa ka mid ahaa dhinacyadii isku ho wlay xalinta khilaafka Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, balse waxaa la sheegay inuu dhinaca Farmaajo u janjeeray, ta as oo Rooble ka careysiisay.
Sidoo kale dhinacyo kala duwan isugu jiray siyaasiyiin iyo dad kale ayaa horay ugu dhaliil ay Maadaxweyne Qoor Qoor in doorkiisii sax da ahaa uusan qaadan khilaafkaas, isla mark aana dhexdhexaadinta Madaxweynaha iy Ra’ iisul wasaaraha uusan u gelin hab dhex-dhexaad ah.
Waxaa guul-dareystay dadaaladii ay hor kacayeen Qoor Qoor iyo Lafta Gareen ee lagu xalinayey khilaafka Farmaajo iyo Rooble oo ha atan gaaray heer laga quustay dhex-dhaxaadi ntooda, inkastoo Puntland ay ku dhawaaqday Inay dhex-dhexaadin doonto.
Ilo ku dhaw xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa Caasimada Onlinesheegtay in ay u sheegeen in Xalay meesha laga saaray mad-madowgii u dhaxeeyay Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Mada xweyne Qoor Qoor oo labadoodu ay xal ka gaareen.
Ganacsade Xasan Iidow Muxumad "Kobo c”ayaa ku guuleystey doorasho Shalay a dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dow lad goboleedka Hirshabelle.
Xasan Koboc ayaa waxa uu helay codad gaaraya 69 cod,hal ka uu musharaxii la tartam ayay Cabdinuur maxamed Ibraahin uu ka helay codad gaaraya 22 cod.
Senator Xassan Koboc ayaa noqo naya Sen atarkii lixaad ee lagu door to magaalada Jow har toddobaad kan waxaana dhiman labo kursioo ka mid ah kuraasta baarlamaanka Hirsha be lle.
Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyay Gar oonka diyaaradaha degmada Buulo-Burde
Wararka naga soo gaaraya degmada Buulo-Burde ee G/Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayan in Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay qar axyo la beegsadeen Garoonka diyaaradaha de gmada, halkaas oo bilihii la soo dhaafay uu ka socday dhismo xoogan.
Qaraxyada oo isugu jiray Bambooyinka Ga canta laga tuuro iyo miinada nooca dhulka la gu Aaso ayaa waxaa la sheegay in uu saam eyn weyn ku yeeshay dhismaha ka socday Ga roonka diyaaradaha degmada Buulo-Burde ga ar ahaan qeybaha hubinta iyo sugida rakaabka diyaaradaha.
Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in qaraxyada ay bur buriyeen qeyb kamid ah Goobihii la dhisay kuwaas oo kamid ahaa me elaha ugu muhiimsan Garoonka, sida ay Risa ala u sheegeen ilo dadka degaanka ah.
Saraakiil ka tirsan laamaha Amniga degma da Buulo-Burde ayaa dhankooda waxaa ay sheegeennin qaraxyada uu hal qof ku geeriyo oday Saddex kalena ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku su gan degmada Buulo-Burde ayaa waxaa ay ho wlgallo xoogan ka wadaan duleedka degmada Buul-Burde gaar ahaan aaga Garoonka, iyaga oo baadi goobaya dadkii ka dambeeyay qarax ada.
22-kii Bishii June ee sanadkii tegay ee 2020 ayay aheyd markii qaraxyo Miino oo lagu xiray qeybta Nasahada ay waxyeelo u geysteen Ga roonka, waxaana qaraxyadaan ay kusoo aad ayaan xilli dhawaan la filayay inay dhismaha Garoonka xariga ka jaraan Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo kuxigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabag eed)
Wasiirka wasaaradsa Ganacsiga iyo War shadaha Xukuumadda Soomaaliya Khaliif Ca bdi Cumar ayaa Shalay kulan la qaatay safiirka cusub ee Mi dowga Yurub u soo magacaa bay Soomaaliya Amb.Tiina Intelmann.
Kulanka ayaa looga wada-hadlay mashru uca PSDP ee horumarinta qeybaha wax-soo-saarka iyo weli ba taageerada Midowga Yurub ee horumarinta qeybaha kala duwan ee Gan acsiga dalka.
Wasiirka wasaaradsa Ganacsiga iyo Warsh adaha Xukuumadda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar ayaa uga mahad celiyay dalalka Mid owga Yurub mashaariicda kala duwan oo ay ka fuliyaan Soomaaliya, isaga oo balan qaad ay inay la Shaqeyn doonaan.
Safiirka cusub ee Midowga Yurub u soo mag acaabay Soomaaliya Amb.Tiina Intelmann ay aa dhankeeda sheegtay inay sii wadi doonaan taageerada nooc walba leh oo ay siiyaan
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Nin kaligii ku guuleystay inuu Al-Shab aab kaso xareeyo dad kor u dhaafaya 100 qof
Cabdullaahi Sheekh Cabdi Sheekh Farxaan oo hore u ahaa Amiirkii Al-Shabaab ee Baar-sanguuni iyo Xubin kamid ah guddiga shuu rada ee kooxdaasi, ayaa xiligan ah Shaqsi si weyn u kala fur-fura dagaal-yahanada Al-Shabaab.
Cabdullaahi oo ka soo hor-muuqday ba rnaamijka Daljir ee Telefishanka Jubbal and ayaa waxa uu sheegay in sababta u weyn ee kooxdaas ugu baxay aheyd kadib markii uu arkay gefaf bad an oo ka dhan ahaa Diinta Islaamka.
"Markaa shaqadoodii ka tegay, waxay (Al-Shabaab) i xireen 40 cisho kadib markaa ka hor imid in aan soo guro lacagaha ay ka qaa tan beelaha,” ayuu yiri Cabdullaahi Sheekh.
Markii uu ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ay aa waxa si weyn usoo dhaweeyay maamulka Jubbaland, oo asagu uga faa’iideystay dagaal ka ka dhanka ah kooxdaas ee maamulku kula jiro fikirkaas xagjirka.
Cabdullaahi Sheekh Cabdi ayaa waxa uu waqti badan geliyay tan iyo markii uu kasoo ba xay kooxda Al-Shabaab sidii uu dad badan u ga soo saari lahaa kooxdaas, maadama uu xil igan is-bedel weyn ku yimid fikirkiisi.
"Dadku inta badan wey ila soo xiriiran, anig una aan qolada amniga la xiriiriyo, kadib mar ka aan tagno furimaha hore ayaa ka shaqeyna sidii aan ninkaas u soo galin laheyn xeyndaab ka aan rabno,” ayuu yiri.
Si kastaba, waxa uu ku guuleystay intii uu ku jiray howsha kala fur-furka Al-Shabaab in kooxdaas ka soo baxaan in ka badan 100 ruux oo iskugu jira dumar iyo rag, kuwaasi oo bad ankooda ay fursado shaqo abuuris ah siisay mamulkaJubbaland.xigasho:caasimadda.net
Laftagareen oo faah faahiyay waxyaab ihii uu kala hadlay Safiirka Itoobiya
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Ko onfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ayaa faah faahin guud ka bix iyay waxyaabihii aynka wada hadleen Safiirka Dowlada Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Mu dane Amb, Cabdifataax Sheekh Cabdullaahi, oo Shalay gaaray Magaalada Baydhabo.
Madaxweyne laftagareen wa xaa uu sheegay inay ka wada hadleen xiriirka dheer iyo wa dashaqeynta wanaagsan ee ka dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Itoobi ya iyo Arrimo la xiriira doorashooyinka socday.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray inay ka wada hadleen arrimo ku saa bsan amniga guud ee degaannada Koonfur Galbeed iyo kan doorashooyinka, waxaana uu sicad u sheegay in dowladda Itoobiya ay uga duwan tahay dowladaha kale.
Kulan deg deg ah oo laga yeeshay Sha qa aqo ka dhacday deedka Beled-Xaawo
Waxaa degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo kulan ku yeeshay, Saraakiisha , Saraak iil xigeenada Ciidamada G/Gedo Maamulka De gmada Baladxaawo, kaas looga hadlayay Amn iga xaduudaha iyo Shaqaaqadii ka dhacday duleedka degmada Beled-Xaawa.
Shaqaaqada ayaa waxaa ay u dhaxeeysay Ciidamada do wladda Soomaaliya ay geey say Gobolka Gedo iyo kuwa Kenya kadib markii Ciidama da Kenya ay dileen Nin Shacab ahaa oo ka ba xay degmada Bed-Xaawo kuna wajahnaa M/ Mandheera. Kulanka oo ay goobjoog ka aha ayeen Taliyaha Ciidamada Nisa ee G/Gedo Ca bduraxmaan Cabdulahi Aadan Bakaal Kooke Taliyaha qeybta Ciidanka Asluubta Gobolka G/le dhexe Cali Maxamed Cumar, Taliyaha ur urka 27aad ee Guutada 10aad ahna ku sim aha Taliyaha Guutada10aad Gashanle Xuseen Maxamed Cali Xiddig, waxaa looga hadlay sa re u qaadida iyo adkaynta amniga yareynta shaqaqooyinka xaduudaha ay ka dhacaya De gmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Saraaki hoosyada degmada Beled-Xaawo ayaa kulanka waxaa looga dhageystay xaalad da amniga ee degmad Beled-Xaawo iyo degaa nnada hoosta ee xiga dhanka xaduudka ee Magaalada Mandheera.
Saraakiisha Sar sare ayaa ku amray Ciida mada inay adkeeyaan amniga degmada Bel ed-Xaawo iyo Xaduudaheeda, isla markaana aysan aqbalin in Shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo inta u dhaxeeyaa Magaalooyinka Beled-Xaawo iyo Mandheera.
Dhowr jeer ayaa Ciidamada dowladda Soo maaliya ay geeysay Gobolka Gedo iyo kuwa Kenya waxaa xaduudka dhanka Beled- Xaawo ku dhexmaray dagaalo koo kooban oo geystay khasaaro kala duwan.
Maamulka M/Marka & AMISOM oo ka wada hadlay la dagaalanka Al-Shabaab
Guddoomiyaha Maamulka M/Marka Cabd ullaahi Cali Axmed Waafow ahha Gudoomiya ha gudiga Amniga G/Shabellaha hoose ayaa Shalay kulan la qaatey Taliyaasha ugu sare eya Ciidanka Amisom ee ka howlgalla Gobolka Shabeellaha Hoose.
Kulankan oo ka dhacay Xerada Ciidamada (UPDF) ayaa Gudoomiye Waafow waxaa si ga ar ah ula qaatey taliyeyaaaha Ciidamada AMI SOM ee Magaalada Marka degaannada Na mbar Konton iyo Ceeljaale, kuwaas oo kasoo laabtay safar ay ugu maqnaayeen dalka Uga nda.
Gudoomiyaha Magaalada Marka ayaa Sar aakiisha Ciidamada AMISOM kala hadley xa aladda Amniga guud ee gobolka shebellaha Hoose oo mararka qaar ay ka dhacaan dag aalo u dhaxeeyo Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidamada AMISOM ee Magaa lada Marka Col Peter Angufibo Garr ayaa she egey in muhiimad gaar ah u leedahay wada shaqeynta Gudoomiyaha kala dhexeyso, isla markaana ay siwadajir ah u wada sugi doo naan Amniga.
Ugu danbeyn Guddoomiyaha Magaalada Marka Cabdullqahi Cali Axmed Waafow ayaa CiidankaAMISOM la wadaagay in muhiim tah ay wadashaqeyn dhexmarta isaga iyo Taliya asha ugu sareeya Ciidanka AMISOM loo loo dar dargeliyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Kulan dhawaan Magaalada Marka ku dhe xmaray Saraakiisha Ciidamada AMISOM iyo guddoomiyaja degmada waxaa lagu go’aam iyay in la qaado howlgal ka dhan ah Al-Shab aab., kuwaas oo ku sugan degaano hoostaga Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wararka ka imaanay magaalada Garowe ee xarunta maamul-goboleedka Puntland ayaa sheegaya in uu baaqday shir wada-tashi ah oo madaxweyneyaasha maamul-goboleedyada ay u ballansanaayeen in magaaladaasi uu uga furmo maalinta berri ah oo taariikhdu ku bee gan tahay 21-ka Sebteembar.
Shirkaasi ayay madaxweyneyaasha maa mulgoboleedyadu kaga arrinsadaan lahaayeen dardargelinta qabsoomiddda doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda dalka, kaddib khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay madaxweyna ha iyo ra'iisalwasaaraha Soomaaliya.
Ilo xog ogaal ah oo ku dhow madaxtooyada Puntland ayaa BBC-da u xaqiijiyay in shirkaasi uu baaqday kaddib markii madaxweynaha Galmu dug uu sidaasi dalbaday.
Shirkani oo 17-kii bishan lagu shaaciyay warsaxaafadeed ka soo baxay shir aaladda Zoom ay ku yeesheen madaxda maamul-gob oleedyada ayaa waxaa laga reebay ra'iisalwa saare Maxamed Xuseen Rooble, arrintaasi oo dad badan ay la xiriirinayeen go'aan ka soo ba xay madaxtooyada Soomaaliya oo awooddiisa fulinta looga xayuubiyay R/lwasaare Rooble.
Xogta ay BBC-du heshay ayaa sheegeysa in wadahadal dhex maray madaxweynaha Gal mudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor iyo R/lwasaare Rooble kaddib, uu Qoor-Qoor ka codsaday dhiggiisa Puntland in shirkaasi la hakiyo.
Ilaa haatan lama oga waxa rasmiyan ka soo baxay kulanka Qoor-Qoor iyo ra'iisalwasaare Rooble, haseyeeshee kulankaasi ayaa horsed ay in la baajiyo shirkii madaxweyneyaasha ma amul-goboleedyada ay uga arrinsan lahaayeen doorashooyinka dalka iyo xaaladda siyaasad eed ee dalka.
Madaxweynaha Galmudug ayaa ka mid ah aa shakhsiyaadkii isku xilqaamay xalinta khil aafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaare Rooble, haseyeeshee waxaa jirtay aragtiyo ay qabeen siyaasiinta mucaardka ahi iyo dad ka ag dhow xafiiska ra'iisalwasaaraha oo madaxweyne Qoor-Qoor u arkayay in uu aad ugu dhow yahay madaxweyne Farmaajo.
Dedaalladaasi la doonayay in lagu soo af jaro khilaafka madaxweynaha iyo R/lwasaa raha oo ay si wada jir ah u wadeen Qoor-Qoor iyo dhiggiisa Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laf ta-Gareen ayaa markii dambe guuldareystay.
Waxaana dad badan ay ka dhur sugayeen waxa ka soo bixi karaya shirkan haatan baa qday.
Madaxweyne Geelle oo Shalay ku lab tay Jabuuti kadib wararkii laga faafiyey
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Shalay kusoo laabtay Jabuuti, ma almo kadib markii la faafiyey warar sheegaya inuu xanuusan yahay, kuwaas oo dowladda ay beenisay.
Geelle oo ku maqnaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska, ayaa waxaa garoonka Jab uuti kusoo dhoweeyey mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ciidamada.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Jabuuti ay aa qoraal u muuqda inuu ku so cday dadka faafiyey wararkaas oo uu Shalay soo dhigay tw itter ku yiri "Hamiga aan ku hi igsaneyno horumarka dalkeena lama kulmi do ono waxa tabar-darri ah. Waxaan madaxweyn aheena u rajeyneynaa soo laabasho nabad ah.”
Toddobaadkii tageya ayaa waxaa aad ugu baahay baraha bulshada, warar sheegayey in madaxweyne Geelle "loola cararay dalka Fara nsiiska, oo xaaladdiisa caafimaad ay liidato.”
Hase yeeshee waxaa wararkaas waxba ka ma jiraan ku tilmaamay Wasiirka Arrimaha Dib edda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, oo qo raal soo dhigay bartiisa twitter-ka.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuu wanaagsan yahay. Dhammaan wararka la wa reejinayo ee ku saabsan xaaladdiisa caafim aad waa kuwa ka fog xaqiiqda,” ayuu yiri Ma xamuud Cali Yuusuf.
"Wuxuu fasax qaatay dhowr maalmood, wu xuuna marayaa tijaabooyin caafimaad oo la xir iira nasasho la’aan oo ah inuusan ka tegin dal ka xagaagan oo dhan,” ayuu ku daray.
Wasiirka ayaa sheegay in madaxweyne Geelle uu dhowr maalmood kadib dib u billaabi doono shaqadiisa. "Ma jiraan wax gaar ah oo laga walaaco,” ayuu yiri.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo 73 jir ah ayaa Jabuuti xukumayey tan iyo 1999-kii, waxaana bishii June ee 2021 loo doortay mu ddo xileedkiisii shanaad
Maamulka degmada Buula-burde oo faahfa ahiyay qaraxyada lagu bur buriy ay dhisma ha Garoonka
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawac may qaraxyo lagu weerarray dhismaha cusub ee garoonka Buula-burde ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Qaraxyada oo lagu xiray dhisme cusub oo loogu talagalay dadka ka dhoofaya ama ka soo dagaya garoonka inay sii maraan ayaa ga bi ahaanba dhulka lagu daray sida ay muujin yaan sawiro laga soo qaad ay.
Maamulka deegaanka ay aa ku eedeeyay Al-Shabaab inay ka dambeeyeen qaraxy da lagu burburiyay dhismaha cusub ee garoon ka diyaaradaha Buula-burde.Guddoomiyaha de gmada Buulo-Burde Axmed Mahad Nuur ayaa sheegay in saka markii Maamulka iyo Ciidam ada ku baxeen Garoonka uu ka dhacay qarax ay Al-Shabaab joos geliya an matior yaalay Ga roonka, isla markaana Shanta qof ay ku dha awacmeen. Waxaa uu ha dalkiisa uu intaasi ku daray in dhamaan dadkii qaraxa ku dhaawacm ay la keenay Magaalada Muqdishi, sidoo kal ena ay sameyn doonaan da daal ku aadan si dii Ciidamada doadda iyo ku wa Jabuuti ay u sugi lahaayeen Amniga Garo onka.
Dad badan ayaa is weeydiinaya sababta ay ku dhacday in Garoonka diyaaradaha degma da Buulo-Burde oo amnigiisa ay gacanta ku ha yaan Ciidamada dowladda iyo kuwa Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ay Al-Shabaab ai fudud qar axyo ku burburiyaan.
Niyad jabka Fransiiska: Mareykanka iyo Au stralia wayna khiyaameen, kalsooni da